निर्दयी Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
कस्ता निर्दयी बाबु आमा, जसले प्रेम सम्बन्ध छुटाउन आफ्नै छोरीलाई छ वर्षसम्म खोरमा थुने !!!
[wp_ad_camp_2] एकजना युवकसँग राखेको प्रेम सम्बन्धका कारण एक युवतीले ६ वर्षसम्म खोरमा थुनिनु परेको छ, त्यो पनि आफ्नै बाउ आमाबाट । [wp_ad_camp_5] सुन्दैमा झसँग लाग्ने यो घटना चीनको हो । छोरीले प्रेम सम्बन्ध राखेको...
निर्दयी बाबु जसले, १० वर्षकी छोरीलाई जिउँदै गाडे !!!
[wp_ad_camp_3] छोरीमाथि हुने गरेको लैंगिक विभेदको चरमोत्कर्षका रुपमा एक व्यक्तिले आफ्नी १० वर्षकी छोरीलाई जिउँदै गाडेका छन् । भारतको त्रिपुरास्थित पुटिया गाउँमा शुक्रबार भएको यो त्रासदीपूर्ण घटनामा अब्दुल हुसेन नामका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...
‘मान्छेको जात नै निर्दयी छ’ ! यसरि खाँदा रहेछन जिउदै बाँदरको दिमाख …. भिडियो सहित !!!
[wp_ad_camp_3] यो पृथ्वीमा मान्छे जस्तो निच र घृणित कार्य गर्ने प्राणी अरु कुनै नहोला |मान्छेले मान्छेको त मासु खान्छन भने पशुको त के कुरा | मासु खाने पनि मानिसको फरक फरक तरिकाहरु छन् |...